SAMOTALIS: SOCDAALKEYGII SWEDEN IYO NORWAY...MUSTASHAR AHMED HASSAN ARWO
SOCDAALKEYGII SWEDEN IYO NORWAY...MUSTASHAR AHMED HASSAN ARWO
qaranimada aynu la soo noqonay iyo xuska 18ka May 2016. Waxay ahayd maalin damaashaad iyo xusuus murogo iyo qiimeyn guulaha halgankii SNM ee dalka lagu xoreeyey. Maalin reer Soomaliland oon cidi ka maqnayni go' aansadeen inay ka baxaan midnimadii dulmiga iyo duudsiga, ooy noqdaan qaran iskii u madax banaan soona celiyaan qaranimadii ay shuruud la'aanta ku fool eryeen.
Waxa xigtay inaanu bulshoweynta Sweden ee reer Soomaliland oo fagaaraha Barlamaanka ee badhtanka Stockholm oo banaan bax dhoolo tus iyo bandhig kala qayb qaadano annaga oo qudbado taariikh iyo guubaabo ka jeedinay fagaaraha. Waxaan idinku dhaafayaa intiina aan ka bogan warbaahinta dalkeen Videogan hoose ooy ku dhan yihiin barnaamajkaasi. Guji linkan oo hoos ka daawo.
Seddex: In La dhiso ha'yad Swedish ah oo ka hawl gasha Somaliland kalana shaqaysa mashaariicda ay Sweden wado.
Labels: Democracy, kulmiye, Maqaalada Ahmed Arwo, NEWS, POLITICS, Somaliland